Ndịàmà Jehova Hà Nọ n’Òtù? | Ajụjụ Ndị Mmadụ Na-ajụkarị
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Altai American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Assamese Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Basque Bassa (Cameroon) Batak (Toba) Bengali Bislama Bosnian Boulou Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chavacano Chichewa Chin (Hakha) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chol Chuvash Cibemba Corsican Croatian Czech Dangme Danish Digor Dutch English Estonian Ewe Fante Faroese Fijian Finnish Fon French Ga Galician Garifuna Georgian German German Sign Language Greek Greenlandic Guarani Gujarati Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Hungarian Sign Language Iban Icelandic Igbo Iloko Indonesian Irish Sign Language Italian Italian Sign Language Japanese Javanese Kabiye Kabyle Kannada Karen (S'gaw) Kikamba Kikaonde Kikongo Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisi Kisonge Kongo Korean Krio Kwanyama Lamba Latvian Lingala Lithuanian Low German Luo Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Mazatec (Huautla) Mende Mingrelian Mixe Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngangela Nias Norwegian Nzema Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Aruba) Persian Polish Portuguese Portuguese (European) Punjabi Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Rarotongan Romanian Russian Russian Sign Language Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Spanish Sign Language Sunda Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tankarana Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Totonac Tsonga Turkish Turkmen Tzeltal Tzotzil Ukrainian Urdu Valencian Venda Vezo Vietnamese Wallisian Welsh Xhosa Zapotec (Isthmus) Zulu
Ndịàmà Jehova Hà Nọ n’Òtù?
Mba, Ndịàmà Jehova anọghị n’òtù. Kama, anyị bụ Ndị Kraịst. Anyị na-agbalịkwa ike anyị niile iso nzọụkwụ Jizọs na ịna-eme ihe ndị ọ kụziri.
Gịnị bụ òtù?
Okwu a bụ́ “òtù” nwere otú dị iche iche ndị mmadụ si aghọta ya. Ma, ka anyị leba anya n’ihe abụọ ndị mmadụ na-ekwukarị na òtù pụtara nakwa ihe mere ọ dabaghị adaba ịsị na anyị nọ n’òtù.
Ụfọdụ ndị na-eche na òtù bụ okpukpe pụtara ọhụrụ ma ọ bụ okpukpe na-anaghị eme ihe okpukpe ndị a ma ama na-eme. Okpukpe Ndịàmà Jehova abụghị okpukpe ọhụrụ. Kama, anyị na-efe Chineke otú Ndị Kraịst oge mbụ si fee Chineke. E dekwara otú ha si fee Chineke na ihe ndị ha kụziri na Baịbụl. (2 Timoti 3:​16, 17) Anyị kweere na ọ bụ Akwụkwọ Nsọ kwesịrị ịbụ o kwuchaa o bie n’ihe gbasara otú anyị ga-esi na-ekpere Chineke.
Ụfọdụ ndị na-eche na òtù bụ okpukpe ọjọọ mmadụ bụ onyeisi ya. O nweghị mmadụ ọ bụla Ndịàmà Jehova ji mere onyeisi. Kama nke ahụ, onye anyị ji mere onyeisi bụ onye Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya na ọ bụ onyeisi ha. Jizọs sịrị: “Onye Ndú unu bụ otu onye, ya bụ, Kraịst.”​—Matiu 23:10.
E nwetụdịghị otú Ndịàmà Jehova si bụrụ ndị òtù ọjọọ. Kama nke ahụ, okpukpe ha na-abara ma hanwa ma ọhaneze uru. Dị ka ihe atụ, ozi ọma anyị na-ekwusa emeela ka ọtụtụ ndị kwụsị omume ọjọọ ndị ririla ha ahụ́, dị ka ịṅụ ọgwụ ọjọọ na ịṅụbiga mmanya ókè. Ihe ọzọkwa bụ na n’ụwa niile, anyị nwere klas ebe anyị na-akụziri ndị mmadụ otú e si agụ na otú e si ede. Anyị na-agbatakwara ndị mmadụ ọsọ enyemaka ma e nwee ọdachi. Anyị na-agbasi mbọ ike ka anyị nyere ndị ọzọ aka ịna-akpa àgwà ọma ka anyị, otú ahụ Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya ka ha na-eme.​—Matiu 5:​13-​16.